iNEHAWU iyaphika ukuba isigqibo sokwehliswa esihlalweni kuka Zuma sinefuthe lamaKomanisi
29th November 2016 Mzi Velapi 0
Sithetha nje isemibini imibutho ephume elubala ngokufuna ukuba umongameli welizwe ehle esihlalweni.
iNUMSA iqhwabela izandla ukuphuma kwe FAWU ku COSATU
13th September 2016 Mzi Velapi 0
Umbutho wabasebenzi bentsimbi iNational Union of Metal Workers Unions, iNUMSA isiqhwabele izandla isigqibo sombutho wabo basebenza ngokutya iFood and Allied Workers Union, iFAWU.
iFAWU ibisandula ukubamba ingqungquthela yelixa lamashumi asixhenxe anesihlanu e Bela-Bela eLimpopo, apho ithathe isigqibo sokuphuma ku COSATU ( Congress of South African Trade Unions). iFAWU ithi imibono yayo ayisafani ne ka COSATU kwaye yilonto ebangela ukuba iqhawule umtshato. iFAWU ibiyenye yemibutho yabasebenzi engazange ixole emva kokugxothwa kuka NUMSA kwi COSATU.
Luyaqhanqalazelwa unyuko lwamaxabiso ka loliwe
1st June 2014 Elitsha reporters 0
Umbutho wasekuhlaneni iSobahlangula, nombutho wabasebenzi iCOSATU eNtshona-Koloni kwakunye neminye imibutho emele abantu abangathathi-ntweni baqhanqalazela unyuko lwamaxabiso lwamatikiti ka Metrorail. Le mibutho ithe yabamba uqhanqalazo inyazelisa […]